Ciidamada dowlada Puntland iyo maleeshiyada uu hoggaaminayo Gallan oo madaafiic isku ganay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada dowlada Puntland iyo maleeshiyada uu hoggaaminayo Gallan oo madaafiic isku ganay
June 23, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Puntland iyo maleeshiyada uu hoggaaminayo guddoomiyihii hore ee gobolka Bari ayaa dhowr madaafiic oo daqiiqado socday isku tuuray saakay oo Khamiis ah deegaan dhanka Koonfurta kaga beegan degmada Carmo ee gobolka Bari, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ma jirto macluumaad deg deg ah oo sheegaya khasaraaha ka dhashay madaafiicdaas.
Dhacdadaan ayaa imaanaysa labo maalmood kadib markii maleeshiyaad gaaraya 200 oo uu hoggaaminayo guddoomiyihii hore gobolka Bari, Cabdisamad Maxamed Gallan ay gaareen tuulada Kalabayr oo 45 km kaga beegan koonfurta magaalo xeebeedka Boosaaso.
Warsidaha Puntland Mirror ayaa xiriir la sameeyay saraakiisha amaanka dowlada Puntland si ay u xaqiijiyaan dhacdadaan balse wali jawaab kama helin ilaa iyo wakhtigan oo aan daabacaada samaynay.
Paris-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Faransiiska ayaa toogtay nin saddex qof ku dilay koonfurta Faransiiska, sida maanta oo Jimce ah uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha Faransiiska. Ninka hubeysnaa ayaa soo afduubtay gaari kadibna waxa uu afduub [...]